Global Voices teny Malagasy » Siria:Vaovao mipoapoaka momba ny niokleary · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Avrily 2008 15:44 GMT 1	 · Mpanoratra Yazan Badran Nandika avylavitra
Sokajy: Amerika Avaratra, Etazonia, Israely, Korea Avaratra, Syria, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Media sy Fanoratan-gazety, Politika, Vaovao Mafana
Omaly, Ny CIA dia namoaka vaovao momba ilay tondroina ho foto-drafitrasa (reacteur) niokleary Siriana naorin’ny Koreana tavaratra. Nitalakotrokotroka ny fivoak’izany tamin’ireo fampahalalam-baovao samihafa.
Ny tantara dia nanomboka tamin’ilay fanafihana an’habakabaka  tsy fantatra antony nataon’i Israely tany avaratr’i Siria tamin’ny Septambra 2007. Taorian’izay dia nandeha be ny resaka momba ny mety ho fisian’ny fifanarahana fiaraha-miasa eo amin’ny sehatry ny niokleary eo amin’i Siria sy Korea avaratra. Nefa na Israely na ry zareo any USA dia samy nitana ho tsiambaratelom-panjakana ny anton’ilay fanafihana hatramin’ny omaly.
Efa imbetsaka no nandavan’ny olom-panjakana siriana ity fiahiahiana ity. Ary ny A.I.E.A. dia nanakiana mafy ny fihetsik’i USA sy Israely tamin’ny fanafenam-baovao hatramin’izao, ary koa ny fampiasana hery alohan’ny fanomezana fotoana ny ONU (Firenena Mikambana) mba hanamarina ilay vaovao.
Tsy nampandry saina ireo mpitoraka blaogy siriana ny votoatin’ilay vaovao, saiky ny rehetra mihitsy no nahatsiaro ny fomba nataon’i Collin Powell  ho fampahafantarana ny ONU momba ireo WMD nolazaina fa nisy tao Iraka nefa tsy hita velively hatramin’izao.
Joshua Landis no mandravona ny fanehoan-kevitr’ireo mpampahalala vaovao maro manodidina iny vaovao iny no sady mitondra fanamarihana momba ny politikan’i Amerika “Daroka -aloha-avy eo-manontany”
Fanakianana faharoa amin’ny ezakin ‘i CIA dia ny filazana fa i Washington dia tsy tokony handrisika velively an’i Israely hanjera baomba nefa tsy nandalo ny lalan’ny ara-dalana, ireo foibe iraisam-pirenena, ary ny fifanatonana am-pilaminana. Ny “Daroka -aloha-avy eo-manontany dia azo antoka fa hanaratsy jery an’i Amerika eo imason’ny fiombonam-be iraisam-pirenena. Tsy hanao ezaka mihitsy zareo mba hamafana ny hatezeran’ny Arabo amin’ny USA sy ny fanjakazakana israeliana. Ny mifanohitra amin’izay aza, ity fomba voajanahary mandray ny daroka ho safidy voalohany ity dia mandrisika ny sasany hanao toy izany koa.
Sasa avy amin’ny The Syria News Wire, dia miezaka mametraka ireo fiampangana  ho ao anatin’ny tontolo iraisam-pirenena nipoirany ary manontany tena ny amin’ny antony niandrasan’izy ireo fotoana lava be toy izao vao namoaka izany vaovao ‘tena lehibe’ izany.
Tsy misy zava-baovao eto. Natevenina ireny fiampangana ireny rehefa nandrava trano avo iray tany Siria tamin’ny alalan’ny fanafihana an’habakabaka i Israely tamin’ny Septambra lasa teo. Namoaka sary ‘tsy azo idifiana’ ankehitriny ny avy any USA ary natolony ny foibe misahana ny niokleary ao amin’ny ONU. Saingy tsy faly ry zareo – tezitra mafy ny A.I.E.A. amin’ny halavam-potoana nanolorana ireto sary ireto.
Satria nahoana ary ny amin’ilay halavam-potoana? Jereo ny fandrindrana. Tonga indrindra tamin’ny andro tokony hamaranan’i Amerika ny fifanarahany amin’ny Korea Avaratra izy ity. Ary roa andro taorian’ny namoahan’i Israely ho fanta-bahoaka ny fanekeny hamerina ireo faritry ny havoan’i Golana nogiazany ho takalon’ny fifanarahana fandriampahalemana miaraka amin’i Siria.
Ary farany, hijanona ao Ihsan isika, izay tsy mandry saina velively  ny amin’ireo hoe zava-marim-pototra ao ambadik’ireo endrikendrika ireo, nefa miseho ihany koa ny olana hafa: Inona no tena tanjon’ity fanorenana ity, toa miatrika famadihana avo lenta isika. “Misy olona ambony ao Damaskosy ve tafiditra amin’izy ity sa tsia?” hoy ny fanontaniany.
Tsy hoe nalaina avy amin’ny satelita ireo sary, izay raha ny marina, ny ankabeazan’ireo sary tena manaitra dia sary nalaina avy ao anatiny ary natambatambatra, avy eny ivelany, ary metatra vitsy monja miala ilay trano avo sy nandritra ny dingana maro tamin’ny fanorenana azy. Izay naka ny sary dia tsy maintsy teny an-toerana ary tsy nila niray tsikombakomba lavitra akory. Ny tsiambaratelo mampiahiahy manodidina ity “tetika” ity dia mazava loatra fa mila fepetra fandriampahalemana faratampony sy “tsy azo itondrana fitaovana fakana sary” izay hita manerana ilay toerana. Sady koa, izay (na ireo) olona naka ny sary dia nalalaka tsara tamin’ny fifidianana ny zoron-tsary.
Iray amin’ireto zavatra roa ireto no dikan’izany, tsy toerana miafina (top secret) velively araka izay ambara izy ity ary azon’ny rehetra naleha, na nisy olom-be tamin’ny manodidina na namana iray tamin’ny sangany sy tena azo antoka nampisahanina azy. Na izany aza , izaho dia mirona amin’itsy farany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/04/27/904/
 vaovao : http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7366658.stm
 fanafihana an’habakabaka: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7024287.stm
 mandravona : http://joshualandis.com/blog/?p=688
 mametraka ireo fiampangana: http://saroujah.blogspot.com/2008/04/explosive-claims.html
 sy mandry saina velively: http://ihsaniat.blogspot.com/2008/04/rats-smell-worse-than-fish.html